माओवादीको हिसाबकिताब, एकता कि बिघटन ? « Himal Post | Online News Revolution
माओवादीको हिसाबकिताब, एकता कि बिघटन ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २३ श्रावण ०६:५३
‘माओवादी एउटा आन्दोलन थियो, पार्टी मात्रै थिएन । हामीले बनाउने भनेको माओवादी हिजोको जस्तो थिएन । पार्टीमा अहिले गुटबन्दी मौलाएको छ । जनतामा जाने गरी सामाजिकीकरण हुन सकेको छैन । नेतामुखी भइयो, नीतिमुखी त हुनै सकिएन । हामी सच्चिनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हौं भने पार्टी विघटन गरिदिऊँ, यतातिर पनि सोच्न सकिन्छ ।’माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका जिल्ला इन्चार्जसहितका नेताहरूलाई पेरिसडाँडामा बोलाएर यही साउन ७ गते यसरी भनेका थिए ।
त्यही बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी विचारधाराका पार्टीहरूलाई एकताका लागि आह्वानसमेत गरे । दाहालका यी दुई कदमले माओवादीवृत्तमा ‘धुव्रीकरण’ कि ‘विघटन’ भन्ने बहस चलेको छ ।
विश्लेषक सोमत घिमिरे सडकमा पार्टी बलियो नहुनु, संसदीय मोर्चामा पनि कमजोर देखिनुले प्रचण्ड दबाबमा परेको टिप्पणी गर्छन् । यही कारण उनले माओवादी विचारधाराका शक्तिसँगको एकता आह्वान र पार्टी विघटनको धम्की ‘पुनर्गठन’को सम्भावना खोज्न दिएका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई अपेक्षित सफलतासमेत दिएन । अन्य विभाजित शक्तिको अवस्था पनि निराशाजनक देखिएको छ । यसले माओवादी वृत्तभित्रका पार्टी÷समूहलाई नयाँ ढंगले सोच्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ ।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रचण्ड, वैद्य, चन्द र भट्टराईलाई मिल्न नदिन वैचारिक भिन्नता र ‘इगो पोलिटिक्स’ मुख्य अवरोधका रूपमा रहने विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरको बुझाइ छ ।
यद्यपि, उनी प्रचण्ड-चन्द भने एकै ठाउँ आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्दैनन् । ‘दुई-चार वर्षपछि प्रचण्ड र विप्लवका बीचमा एकता हुन सक्छ । तर, वैद्य र भट्टराई प्रचण्डसँग एकतामा आउँछन् जस्तो लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘भट्टराई-वैद्य प्रचण्डसँगको इगोको टसल र स्वत्वको लडाइँका कारण एकतामा आउँदैनन् ।’ प्रचण्ड र चन्द दुवैजना महत्वाकांक्षी भएकाले कुनै घटनाविशेषपछि एकै ठाउँमा पुग्ने सम्भावना रहेको उनको ठम्याइ छ ।